Baningi omakhalekhukhwini kunabantu bezwekazi laseMelika. Lesi simo siyiqiniso ikakhulukazi eLatin America, lapho kunabantu abanezingcingo ezimbili noma ezintathu. Ngakho-ke, zingaki ukushajwa kabusha kweselula ePeru okwenziwayo? Ungashajwa kanjani kabusha iselula evela ePeru? Konke lokhu okwenzekayo kusuka esidingweni sokuxhumana amahora angama-24 ngosuku ...
Ukushaja kabusha ibhalansi yakho ku-inthanethi kunoma iyiphi isevisi yocingo e-Chile, noma ngabe ukuphi, kulula kakhulu, futhi ukuba kude nabantu esibathandayo kakhulu kuyisimo esinzima kakhulu. Kodwa, ngenxa yezinzuzo ubuchwepheshe obusinika zona, namuhla singaxhumeka kancane. Kunamakhulu...
Njengoba sonke sazi, ukuba kude nabantu obathandayo kungaba nzima kakhulu. Kodwa nge-rechargemovil.org uzokwazi ukuqhubeka uthintana nabo, ngenxa yokuthi sinokuthunyelwe okuningi okuhloselwe ukuphendula noma yimiphi imibuzo. Uma ukwelinye izwe futhi ufuna ukwenza kabusha iselula yamazwe ngamazwe, usufike endaweni efanele ...
Izingcingo eziphathwayo eVenezuela zibe nokwanda okuqinile kule minyaka eyishumi edlule. Lokhu kubangelwa ikakhulukazi ukusetshenziswa okuqhubekayo kwedatha yeselula. Kodwa into ezuzisayo kumakhasimende abo amanani aphansi aphathwa yizinkampani. Ukushaja kabusha omakhalekhukhwini e-Venezuela sekuyinto ehamba phambili. Ngaphezu kwengxenye...
Sizokufundisa ukuthi ungashajwa kanjani kabusha ibhalansi yeselula yelungu lomndeni noma umngane ose-Ecuador. Siyazi ukuthi ukuba kude nabathandekayo bakho kungaba nzima, kodwa ngenxa yomlingo wezokuxhumana ungazizwa usondelene nabo. Ukushaja kabusha umakhalekhukhwini e-Ecuador kulula kunalokho kubonakala. Abantu abaningi ...
Kulesi sihloko sizokufundisa ukuthi ungashaja kanjani kabusha iselula yelungu lomndeni noma umngane oseBolivia. Ziyanda izinkampani ezizinikele ekushajelweni kabusha kwamaselula e-Bolivia zengezwa zivela phesheya, kufanele ufake inombolo yakho yocingo bese ulandela izinyathelo zokuqedela ukushajwa kabusha kwebhalansi. Isevisi esheshayo...
Kulesi sihloko sizokufundisa ukuthi ungashaja kanjani kabusha iselula yelungu lomndeni noma umngane ose-Colombia. Kunzima ukuba kude futhi ungakwazi ukuxhumana neyakho, kodwa ngenxa yomlingo wezokuxhumana ungazizwa usondelene nabo. Ukushaja kabusha iselula ukuya e-Colombia kulula kunalokho kubonakala. I…
Kulo mcimbi sizochaza zonke izindlela zokwenza kabusha i-Rebtel cell phone, ukuze abangani bakho bakwamanye amazwe bathole isikweletu ukuze bashaye izingcingo. Kodwa okokuqala ake sibone ukuthi iyini i-Rebtel nokuthi isebenza kanjani. I-Rebtel yinkampani yezokuxhumana yaseSweden, eyasungulwa ngo-2006. Ihlinzeka ngezinsizakalo zomakhalekhukhwini, kuhlanganise ...
Namuhla, ukushaja kabusha iselula ye-Telcel kulula kunangaphambili. Uma ungomunye walabo bantu abachitha amahora besebenzisa ifoni noma bengathandi nje ukuphelelwa ibhalansi, lapha uzothola zonke izinketho zokuhlala uxhumekile. Ungakhokha ibhalansi kumakhalekhukhwini wakho usebenzisa i-inthanethi noma ngokuvakashela izindawo ezigunyaziwe eduze nendawo ohlala kuyo ...
Uma ufuna ukuthola ulayini okhokhelwa ngaphambili, i-Suop ingenye yezinketho eziningi ezitholakalayo emakethe ukuze ikunikeze izinzuzo eziningi. Yonga imali uma ushaje kabusha iselula ye-Suop futhi ujabulele ukukhushulwa okunikezwa yile nkampani. Ukushaja kabusha iselula ye-Suop manje sekulula, lo mugqa okhokhelwa ngaphambili unezindlela ezihlukene zokushajwa onawo. ...